Tirada dhimashada Spain oo gaadhey 932 hal maalin gudaheed: – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Tirada dhimashada Spain oo gaadhey 932 hal maalin gudaheed:
Tirada dhimashada Spain oo gaadhey 932 hal maalin gudaheed:
Khudbad kooban oo Jimcihii ka soo baxday, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres wuxuu ku baaqey xabbad-joojinta caalami ah, isagoo ku booriyay dhammaan dhinacyada isku dhacay inay hubka dhigaan, dhamaantoodna la dagaal maan cudurkan ku faafey aduunka oo dhan ee coronavirus.
“ dhibaatada ugu xumaa ayaa weli soo socda,” ayuu yidhi Guterres, isaga oo tixraacaya waddamada dagaalladu aafeeyeen sida Syria, Libya iyo Yemen.
“xanuunka COVID-19 ayaa hadda ku faafey dhamaan aduunka oo dhan.”
Isbaanishku wuxuu ku diley hal maalin 932 kale oo cudurkan coronavirus iyadoo tirada guud ee ay gaareyso ay gaareyso 11,000 isagoo ah wadanka labaad ee dhimashada ugu badan ka dhacdey marka laga yimaado Talyaaniga.
maanta Dunida oo dhan, tirada dhimashada coronavirus waxay kor u gaadhey 55,203 oo qof, waxaana ka caafimaadey Tiro gaadheysa 222332 iyadoo taariikh kale oo naxdin leh ay tahayn inuuu ku dhacey xanuunka in kabadan hal milyan oo uu ritey xanuunkan inta la xaqiijiyay.
Mareykanka ayaa soo sheegay tirada dhimashada ugu badan ee maalin kasta dal kasta illaa iyo hadda ku dhawaad ​​1,200. Haatan waxay wuxuu ku diley in ka badan 6,000 oo dhimasho ah maadaama cudurka faafa uu si dhakhso ah ugu faafayo mareykanka.
In kabadan 1,041119 oo qof ayaa laga helay fayraska adduunka, sida laga soo xigtay xogta jaamacadda Johns Hopkins. In kabadan 222,000 oo qof ayaa kasoo bogsaday cudurka, oo ay ku jiraan 9,000 oo Mareykanka ah.
Waa maxay Fursadaha iyo caqabaha uu biyo-xidheenka wayn ee Ethiopia uu...